Ngaqala ukwazana kuqala nge feysbildingom wathatha engxenyeni yesine yekhulu leminyaka edlule, kwaqala ngethi "eyikhulu imizuzu wezempilo nobuhle." Yethula Sisebenzisa ngokuba ubuso kwaba elula kufinyeleleke. Le mfuneko esemqoka kwaba kuphela umzimba njalo kuhlangene ukunakekelwa nsuku zonke. Namuhla, lapho iminyaka yami kuyeza amahlanu, ngingasho ngokuqiniseka ukuthi feysbilding ubuso kwangisiza nokugcina intsha nobuhle. Mina some ubuso okusaqanda, akukho emphethweni Nasolabial, akukho imibimbi transverse
emabunzini. Inkinga izikhwama phambi kwamehlo noma kwesilevu double mina ayikaze ibe khona. Yingakho ngiye ngentshiseko baqhubeka nokuloba kwalesi sihloko. Ngicabanga ukuthi isipiliyoni sami kuyoba wusizo yonke abagada obakhathalelayo ngokubukeka kwabo.
Kufanele kuqashelwe ukuthi feysbilding ubuso kuwusizo ngasiphi yobudala, njengoba lolu hlelo umsebenzi kufanelekile hhayi kuphela tekuvikela, kodwa nezalo ukulungiswa izinguquko ezihlobene nokukhula. Ukuyibhala ukuzivocavoca kuyinto imizuzu 5-10 nje izikhathi ezimbalwa ngosuku, iyoletha Imiphumela obonakalayo ngaphakathi ngenyanga.
Bonisa Four Izindebe ephelele futhi cheekbones
cheekbones okuphezulu futhi izindebe ezigcwele ezibhekwa izici eziyinhloko ngawo amadoda kuzinga enganakile, ukucacisa umlingani ezikhanga kakhulu. Kuyaziwa ukuthi ngeminyaka ezindebe zethu abe izacile, futhi ukuma ubuso ehle ezaziwayo. Ingabe kungenzeka ukuhlehlisa izinguquko ongenakugwenywa? Ochwepheshe baye athuthukile feysbilding ubuso, ngokuqiniseka athi, "yebo." Thatha ku inkonzo kule sethi elincane umzimba bese ulandela ke nsuku zonke.
Ukuqoqa izindebe zakhe welulele kubo phambili like a baby kokufinyelela ebeleni likanina. Ukubalwa amabili futhi ngokuphelele uphumule imisipha yakho. Phinda umsebenzi futhi. Donsela phambili umhlathi bayigubungele udebe lwangezansi engenhla, idonsele phezulu kuze kufike esihlokweni selinye ekhaleni. Bamba lesi sikhundla amasekhondi 20 uphumule. Yelula izindebe ku ukumamatheka, umlomo kancane evulekile. Kakhulu qinisa entanyeni nezihlathi futhi ahlale kulesi sikhundla amasekhondi 20. Phinda onkamisa A, U, E, kanye ukuhambisana esiphezulu, umlomo wakhe ibanzi ngangokunokwenzeka. Donsa kwesilevu, Imisipha yentamo zingaphazamisi. Yanulekani futhi uvale umlomo, kunjengokungathi ngokumelene ukumelana. Phinda umsebenzi izikhathi 12 futhi uphumule imisipha yakho ebusweni.
Feysbilding ubuso - ukuqeqesha phakathi izikhathi, okuyinto kungenziwa ngisho emsebenzini. Ezivelele isikhathi khulula? Bamba ipensela ngomlomo wakhe bese ubhala emoyeni zonke izinhlamvu zamagama.
Feysbilding izikhwama ngaphansi amehlo nezinkophe alengayo
Emagumbini kwehlisa kwamehlo, amajwabu esindayo futhi edema ukunikeza ubuso uhlobo ukhathazwa futhi ukhathele. Phela, lezi zinkinga hhayi kuphela izintokazi eneminyaka engu, kodwa futhi yilezozintombi abasha ngokwanele. Fihla ukukhubazeka okunjalo cishe kungenakwenzeka ngaphansi izimonyo, kodwa ukuqeda enkingeni kulula ngosizo umzimba ezikhethekile. Isizathu esikhulu puffiness - kuphula umthetho we amanzi lymph kanye umzimba feysbildingom ukusiza ukuxazulula le nkinga.
Lokhu kuzosiza qinisa leso elingenhla. Beka iminwe yakho ngaphansi lift ishiya futhi ibenze e ngokuqinile. Zazhmurte ukunyakaza Friend kanye ejabhile blinked, amehlo akhe namanje ivaliwe. Beka iminwe emibili emagumbini isandla samehlo (isilinganiso phezu yasekhaya, inkomba ngaphandle), vula amehlo akho ububanzi futhi abheke. Phinda izikhathi ezingu-30.
Njengoba feysbilding ubuso - lena umkhuba Uhlelo ukuqeqeshwa kwemisipha ezivamile kufanele zishintshwe ngezikhathi ezithile, uma kungenjalo imisipha ukujwayela izivivinyo okuyisidina, ngiyeke phansi ukuba baphendule kubo.
Lapho mina Kunconywa ukuba abangane bami feysbilding, izimpendulo zabo babe elihle kunawo. Basutha, ngisho labo are jwayele ukusebenzisa amasevisi nokucwala ezibizayo. Uma ngikhuluma iqiniso, Angisona bamangale nhlobo. Ngemva yokuzijwayeza ebusweni ayinakho Izimo, futhi ngokuqinisekile lokhu ubuhlungu ukubukeka.
Ahambisana igama elithi "thina" alinikwa kuwo wonke umuntu
Isitifiketi engalungile kusiphequluli:-ke
Umlando ngingakhululeki Ally Larionovoy